China Vertical Vacuum Focus RF Machine mpanamboatra sy mpamatsy | MENOBeauty
Masinina RF mifantoka amin'ny rivotra tsy mihetsika
Thermolift Focus RF miaraka amin'ny Teknolojia Vacuum
40.68 MHz matetika frekuensi RF momba ny fahanterana
Thermolift dia radio Frequency multi-fampiharana (RF) tsy manam-paharoa amin'ny fitsaboana tsy manafika ny cellulite, ny fanamafisana ny hoditra ary ny fihenan'ny vatana- tsy misy fihenam-bidy.
Teknolojia UniPolar Pro misy patanty an'ny Thermolift dia manome fifehezana fitsaboana faran'izay betsaka amin'ny fampihetseham-batana farany eo anelanelan'ny fanafanana ambonin'ireo épermermis sy ny fanafanana lalina ny tavy ambanin'ny tany. Ny fomba radiofrequency roa dia atambatra amin'ny fitaovana tokana hahatratrarana ny sosona dermal.
Miaraka amin'ny teknolojia In-MotionTM, Thermolift no rafitra voalohany manolotra ny fanamafisana ny hoditra sy ny fikolokoloana ny vatana.
Ny teknolojia fampifangaroana i Thermolift dia manome angovo RF fatratra ho an'ny sela. Miaraka amin'ny teknolojia fanaraha-maso lalina tsy manam-paharoa, ny angovo dia mifantoka amin'ny faritra ambany-dermal, mamela ny epidermis voatahiry. Milamina sy mora ampiasaina izy io
Fitsipika momba ny masinina mifantoka amin'ny vacuum RF
Ny Thermosharp dia manasongadina Dielectric Heating- mekanika miavaka iray izay ananan'ny radiofrequency avo lenta (RF) 40,68 MHz (mandefa signal 40,68 tapitrisa isan-tsegondra) dia ampitaina mivantana amin'ny sela, ka miteraka fihodinana haingana ireo molekiola ao anaty rano. Io fihodinana io dia miteraka disadisa izay miteraka hafanana mahery vaika sy mahomby. Satria ny hoditra dia rakotry ny rano amin'ny ankapobeny, ny fanafanana avy amin'ity mekanika ity dia miteraka fihenan'ny volumetrika ao anaty hoditra- mifaoka fibre efa misy ary manentana ny fananganana collagen vaovao ary manatsara ny hateviny sy ny fampifanarahana azy. Ny hafanan'ny RF avo lenta dia mamela hafanana lalina, homogenous izay mamokatra valiny mitovy.
Teknolojia tsindry ratsy ny gadona CNC
Amin'ny alàlan'ny lamina metrika CNC, ny tsindry ratsy atambatra amin'ny lohan-tsofina miiba tsindry natao manokana, arakaraka ny toe-batana manokana amin'ny vatan'olombelona, ​​mampihatra ny halalin'ny fametahana sy ny fanorana ny sosona epidermaly amin'ny hoditra, ny lalan-drà, ny tavy matavy ary ny sosona ny hozatra. ny rafitra, noho izany dia afaka manatsara ny fikorianan'ny tsiranoka eo anelanelan'ny olombelona, ​​mampitombo ny fivezivezen'ny sela, mampihetsika ny sela, mampiroborobo ny lalan-drà sy ny lalan-drà ao amin'ny lalan-dra tsy azo jerena, manafaingana ny metabolisma ary manatsara ny tontolo anatiny amin'ny hoditra.
Teo aloha: Milina fanorana manala vatana
Manaraka: Masinina Vacuum Physiotherapy Diathermy RET CET
Masinina RF Vacuum azo entina
Fitaovana RF kely miaparitaka
Masinina Vacuum Thermosharp azo entina